Jobily faha-50 taonan’ny FJKM Ny 21 oktobra ny famaranana azy eny Mahamasina
Seminera fandravana ny ozona sy fananganana fitahiana Hofaranana rahampitso etsy Mahamasina
Ho famaranana ilay hetsika ara -panahy isaky ny Sabata nanomboka ny 26 janoary lasa teo izay niainga tamin’ny tsindrimandrin’ ny pastera Benjamina sy ny Radio FM FOI 107.4Mhz dia manomana hetsika ara-panahy lehibe sy fotoam-bavaka izay nialohavan’ ny fitetezana tanana teto Antananarivo izy ireo, miaraka amin’ity onjam-peo ity.
FJKM Fanasim-piderana Antanimena Andrefana Nankalaza an’Andriamanitra noho ny jobily faha-150 taona
1869-2019, feno 150 taona katroka ny FJKM Fanasim-piderana Antanimena Andrefana izay ao anatin’ny synodam-paritany Iarivo Avaradrano.
Pastera Roger Randriamisata “Tarihana tsy hino an’Andriamanitra ny Malagasy…”
Maro ny olona mandika ny loza samihafa miseholany eto amin’ny firenena, izay efa namoizana ain’olona an-jatony mahery ho kapoka na famaizan’Andriamanitra.
Faminanian’ny Akata « Goaikantitra politika lehibe 3 ho lasan-ko razana »
Fanairana sy famohazam-panahy ho an’izay matoritory no adidy miandry ny Akata ao anatin’ny enim-bolana manaraka.
Fjkm Lazaina Ranivo Maritiora 14 taona nisedrana olana ara-pitandremana
12 katroka no nisedra olana ara-pitandremana ny Fjkm Lazaina Ranivo Maritiora ao amin’ny Synodam-paritany Iarivo Avaradrano « SP 19 ».
Pastera Mailhol “Hahazo vahana maneran-tany ny loza sy ny aretina…”
Ho henjankenjana ity taona 2019 ity raha araka ny fanazavan’ny pastera Mailhol, filoha mpanorina ny fiangonana Apokalipsy, omaly.
Taorian’ny fanombohana ny taon-jaobily faha-50 ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) sy ny faha-200 taona nahatongavan’ny LMS (London Missionary Society) tany Antsiranana ny volana aogositra 2017 sy ny ivon’ny fankalazana tany Toamasina ny volana aogositra 2018 teo,
dia eto Antananarivo no hamaranana ny taon-jaobily amin’ity volana oktobra ity. Tapaky ny Komitin’ny Fankalazana tarihin’i Marc Ravalomanana ary fa ny 19-21 oktobra izao no fotoan-dehibe ho an’ny mpino FJKM. Nampahafantatra ny pitsopitsony tetsy amin’ny Tranon’ny Foibe FJKM tetsy amin’ny tohatohabaton’Antananinarenina ireo solontenan’ny Komity fankalazana tamin’ny alalan’ny Pasitera Roger Randriamisata sy Atoa Rajemison Rakotomaharo. Toy izao ny ambangovangon’ny hetsika sy ny fandaharam-potoana : ny zoma 19 oktobra manomboka amin’ny 5 ora hariva, dia eny amin’ny FJKM Andrainarivo no hifamotoana ny mpino rehetra. Famelabelaran-kevitra no hatao amin’io. “Ny mpino Protestanta miatrika ny fiainam-pirenena” no lohahevitra hovoaboasana mandritra izany. Ho avy handray anjara sy hanome voninahitra ireo mpitantana lehibe teo anivon’ny FJKM mbola velon’aina. Ny sabotsy 20 oktobra kosa dia hisy fanompoam-pivavahana lehibe sy fitokanana ny tsangambaton’ny jobily, eny amin’ny Kolejy Teôlôjika Ivato, manomboka amin’ny 10 ora maraina. Ity Kolejy teôlojika ity, izay natao hampiroboroboana ny fanofanana mpitandrina ho maro kokoa noho ny teo aloha satria anisan’ny foto-kevitra ifotoran’ny FJKM rahateo ny hoe “Vontosy Filazantsara i Madagasikara. Hisy ny antsam-piderana sy koranam-pianakaviana arahina fiaraha-misakafo. Ny alahady 21 oktobra kosa no tena hamaranana ny taon-jobily eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ka fanompoam-pivavahana goavana iombonan’ny zanaky ny FJKM rehetra no hatao eny an-toerana, manomboka amin’ny 10 ora maraina. Hisokatra vao maraina ny vavahady, ary hikatona ireo fiangonana FJKM eto Antananarivo sy ny manodidina, fa eny Mahamasina ny rehetra no hiara-kamarana tanteraka ny taon-jaobily. Hisy Asa sy Fampaherezana amin’io alahady 21 oktobra io.